I-China Ukuqhubeka Nokukhawulela Ukugeleza Kwedatha Enqamula Umngcele - Ukuqhathanisa 2022
I-China ukuze iqhubeke nokukhawulela ukugeleza kwedatha yemingcele
Umzila omkhulu wokuya eChina
Ividiyo ye-Amazon Prime (Ividiyo efunwayo); Tom Selleck, Bess Armstrong, Jack Weston (Abalingisi); UBrian G. Hutton (Umqondisi)
Ohlelweni olusanda kukhishwa lweminyaka emihlanu, uMnyango Wezimboni Nobuchwepheshe Bolwazi waseChina (MIIT) ucele ukuphathwa okungcono kokuphepha kwedatha enkulu emngceleni kuze kube ngu-2025, ngokusho kwemibiko.
I-Reuters ibika ukuthi ukuqinisa ukuphathwa kwedatha kugeleza emingceleni yayo kanye nokwesekwa okwandayo kwezinhlelo zomthombo ovulekile kuphakathi kwemisebenzi eyisithupha ebalulekile evezwe ohlelweni.
Njengengxenye yohlelo, i-MIIT izolinganisela ukuthi isilinganiso semboni yedatha enkulu yaseChina sizodlula ama-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezintathu (cishe ama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-470,79) ekupheleni kuka-2025.
Lolu hlelo luphinde lwacela ukuthi kwenziwe ngcono "ukuthengiswa" kwedatha, ukuthuthukisa amandla ekhompiyutha, kanye nokudlala indima yobuholi ekumiseni amazinga obuchwepheshe bomhlaba.
Ukulawula ukuvivinya umzimba
I-Reuters ithi lolu hlelo, olusekelwe ohlelweni lweminyaka eyishumi nane lwaseChina olukhishwe ekuqaleni kwalo nyaka, luphinda kabili isikhundla sezwe sokuqinisa uhlaka lwalo lokulawula ukuthuthwa nokugcinwa kwedatha.
Uhlelo olusha lusiza ukuqinisekisa umbono we-China wedatha "njengesici sokukhiqiza" kanye "nensiza yamasu kazwelonke."
Ikakhulukazi, lolu hlelo olusha lulandela imithetho emibili ebalulekile egxile kudatha izwe eliyiqale ukusebenza kulo nyaka, okunguMthetho Wokuvikelwa Kolwazi Lomuntu (PIPL) kanye noMthetho Wokuphepha Kwedatha, okuwuhlu oluphelele lwemithetho elawula ukuqoqwa, ukucubungula, ukugcinwa nokuvikelwa kwedatha.
Uma uthi nhlá, imithetho isiza ukucacisa izidingo zokuthobela zezinkampani ezisebenza ngaphandle kwezwe elikhulu ukuze ziqinisekise ukuthi idatha yomsebenzisi ivikelekile lapho ithuthwa ngaphandle kwase-China. Kodwa-ke, ngokuvamile zibhekwa njengesipho sezwe sokulawula indlela izinkampani nezinhlangano ezigcina ngayo futhi zihambise idatha ezwenikazi lonke.
Noma ngabe yiziphi izidingo zakho, lezi zinsizakalo zokubamba insimbi ezingenalutho zizosebenza.